एक सानो भान्छामा अधिकतम भण्डारण गर्न5तरिकाहरू बेजिया
मारिया vazquez | 08/06/2021 12:00 | पाक कला
साना रसोईहरू चुनौतीपूर्ण छन्। हामीलाई यति थोरै ठाउँमा चाहिने सबै कुराको लागि कसरी ठाउँ बनाउने? भण्डार अधिकतम गर्नु भनेको भान्साको लागि कार्यशील बनाउने कुञ्जी हो र खाना पकाउने कार्य हामीले आनन्द लिइरहेका छौं। तर यो कसरी गर्ने?
बेजियामा हामीले चालहरूको एक श्रृंखला स .्कलन गरेका छौं अधिकतम भण्डारण एउटा सानो भान्छामा। र तपाईलाई खाली कुचिनको आवश्यक पर्दैन तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सक्षम हुन; रचनात्मकताको साथ तपाईं तिनीहरूलाई पहिले नै सुसज्जित भान्साकोठामा कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुनेछ। नोट लिनुहोस्!
हामीसँग तपाईंसँग साझेदारी गर्ने युक्तिहरू लागू गर्न सुरु गर्नु अघि, हामी तपाईंलाई यो स्पष्ट पार्न चाहन्छौं कि यदि तपाईंसँग भण्डारण ठाउँ भन्दा बढि चीजहरू छन् भने, तपाईंले आफ्नो भान्साको घरलाई कहिल्यै सफासुग्घर बनाउन सक्नुहुन्न। प्राथमिकता, तपाईले प्रयोग नगर्नुहुनेबाट छुटकारा पाउनुहोस् नियमित आधारमा र सबै कुरा धेरै सजिलो हुनेछ।
1 सबै भित्ताहरूको फाइदा लिनुहोस्
2 उपकरणहरूको आकार घटाउनुहोस्
3 हटाउन योग्य टेबलमा शर्त लगाउनुहोस्
4 प्रत्येक चीजको लागि साईट अलग राख्नुहोस्
5 स्लाइडिंग ढोका स्थापना गर्नुहोस्
सबै भित्ताहरूको फाइदा लिनुहोस्
के तपाईको भान्छामा नि: शुल्क भित्ता छ? फ्लोर-देखि-छत समाधान स्थापना गर्नुहोस् यसले तपाईंलाई अधिकतम भण्डारण ठाउँ अनुमति दिन्छ। बन्द भएका भण्डारण समाधानहरू अन्य खुलासँग सँगै जोड्नुहोस् जुन तपाईं आफैंमा दिनहुँ प्रयोग गर्ने चीजको लागि अनुमति दिनुहुन्छ। यी समाधानहरू धेरै गहिरो हुनु आवश्यक छैन; २० सेन्टीमिटर तरकारीहरू, अन्नफल, बीउ र मसलाको साथसाथै साना सामानहरू, कचौरा वा कपहरू भण्डार गर्न गिलास जारहरू व्यवस्थित गर्न पर्याप्त छ।
तपाईं किचन फ्रन्टको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ विभिन्न मसला र भाँडा मिलाउन अतिरिक्त ठाउँ हुन्छ। A धातु पट्टी वा एक साँघुरो तखता तपाईं ठाउँ दिनुहुन्छ वर्कटप र माथिल्लो क्याबिनेट बीचमा तपाईले सोचे भन्दा बढी चीजहरूको लागि।
उपकरणहरूको आकार घटाउनुहोस्
उपकरणहरूले हाम्रो भान्छाको ठाउँको ठूलो अंश लिन्छ। यद्यपि यो यस्तो हुनु हुँदैन; हामी हाम्रो उपकरणको आकारलाई हाम्रो भान्छाको आकारमा अनुकूलन गर्न सक्छौं। प्राथमिकता कुञ्जी हो कुन इलेक्ट्रिकल उपकरणहरू हामी बिना वा हामी आकारमा घटाउन सक्छौं छनौट गर्न।
के डिशवाशर तपाईंको लागि आवश्यक छ? सायद तपाईले यसको आकारलाई यो नियमित रूपमा लगाउनको लागि कम गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, यदि तपाईं ओभरकोक गर्नुहुन्न भने, तपाईंलाई सायद चार बर्नर कुकटपको आवश्यकता पर्दैन। तपाई ओभन वा माइक्रोवेव बिना नै सोचविचार पनि गर्न सक्नुहुनेछ र माइक्रोवेभ ओभनको लागि रोज्ने,aएक डुअल प्रकार्य संग उपकरण। यी र अन्य परिवर्तनहरू जस्तै फ्रिजको आकार घटाउँदा तपाईंलाई चीजहरू भण्डारण गर्न बढी ठाउँको मजा लिन सक्दछ।
हटाउन योग्य टेबलमा शर्त लगाउनुहोस्
एउटा पुल-आउट टेबलले हामीलाई भान्छाकोठामा भण्डारण अधिकतम बनाउन कसरी मद्दत गर्दछ? सामान्यतया जब हामी भान्साकोठालाई सुन्दर बनाउँछौं हामी यसलाई टेबलको भित्ताहरूमा एउटा राखेर गर्छौं। एउटा सानो टेबल जो प्रायः भान्सामा हुन्छ। यद्यपि, आज हामीसँग छैन क्याबिनेटको पर्खाल छोड्नुहोस् एक टेबल राख्न।
पुल-आउट टेबलहरू साना रसोईघरहरूमा टेबुलहरू तहको विकल्पको विकल्प हो। तिनीहरू किचन क्याबिनेटमा एकीकृत छन् मानौं यो टेट्रिसको टुक्रा हो। यस तरीकाले भण्डारण ठाउँ न्यूनतम हुनुपर्दछ।
प्रत्येक चीजको लागि साईट अलग राख्नुहोस्
भण्डारण ठाउँ अधिकतम पार्ने अर्को तरिका प्रत्येक वस्तुको लागि ठाउँ छुट्याउनु हो। केवल यस तरिकाले तपाईं सक्नुहुन्छ प्रत्येक क्याबिनेट अनुकूलन गर्नुहोस् वा धेरै धेरै वस्तुहरू समायोजन गर्न ड्ररहरू। तपाईं यसलाई हटाउन योग्य समाधानहरू, विभाजकहरू प्रयोग गरेर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ ...
प्रत्येक कपाट राम्ररी नाप्नुहोस्, तपाईले त्यसलाई के भण्डार गर्न चाहनुहुन्छ र अनुकूलन गर्न उचित समाधानहरूको खोजी गर्नुहोस्। आज असंख्य छन् स्टोर संगठन को लागी समर्पित जुनमा तपाईंलाई आवश्यक सबै चीज भेट्टाउनुहुनेछ। यति धेरै तपाईं ओभरपेन्ड नगर्न पागल हुनबाट बच्नुपर्नेछ।
स्लाइडिंग ढोका स्थापना गर्नुहोस्
स्लाइडिंग ढोकाले असंख्य समस्याहरूको समाधान गर्दछ सानो ठाउँहरूमा। केवल यसमा उनीहरूले आन्दोलनलाई सजिलो गर्दैन, तर तिनीहरूले तपाईंलाई क्याबिनेटहरू राख्न अनुमति दिन्छ जहाँ परम्परागत ढोकाहरूका साथ त्यसो गर्न असम्भव हुनेछ। माथिको छविमा प्यान्ट्रीहरू हेर्नुहोस्! सरल र सस्तो मोड्युलर प्रणालीहरू र स्लाइडि doors ढोकासँग समान बनाउन तपाईंलाई २enti सेन्टीमिटर गहिरो चाहिन्छ।
के तपाईंलाई यी प्रकारका विचारहरू मनपर्दछ कि भान्साको कार्यक्षमता सुधार्न? के ती तपाईका लागि व्यावहारिक छन्?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » पाक कला » एउटा सानो भान्छामा भण्डारण अधिकतम बनाउन ricks तरिकाहरू
चकलेट, क्रीम र बदामको कप